Hiran State - News: Maxaa ka soo baxay kulankii labada Shariif ee maanta?
Maxaa ka soo baxay kulankii labada Shariif ee maanta?
Muqdisho:- Madaxweynaha Soomaaliya Shiikh Shariif iyo gudoomiyaha barlamanka ayaa maanta kulan ay ku yeesheen Magaalada Muqisho ayaa waxa uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan.
Kulanka oo la doonayey in beesha caalamka la tusiyo iney masuuliyinta TFGdu kulmeen ayaan noqon sida ay dad badan moodayeen. madaxweynaha Somaliya oo si weyn u colaadiyey mudanayasha baarlamaanka Somaliya oo isaga horey u doortay ayaa hada doonayo inuu wax badan ka bedelo siyaasadiisa ku wajahan arimaha doorashada oo xitaa hadii 1 sano loogu daro ay markastaba baarlamaanku uu wax dooran doono. sidaasi daraadeed waxuu doonayaa inuu la heshiiyo mudanayasha baarlamaanka si ay taasi u dhacdana waa inuu u maraa afhayeenkooda.
Afhayeenka baarlamaanka oo isagu la soo baxay siyaasado qun yar socod ah oo inta badan ka xanaajiya Farmaajo iyo madaxweynaha ayaa si toos ah u sheegay ineysan doorasha waqtigeeda ka daba mareyn taasi bedelkeedana uu ka doorbidayo in madaxweynaha iyo xukumada Farmaajo ay hor yimaadaan mudanayasha baarlamaanka hortooda una sheegaan waxa ay ku diidan yahiin iney dalka ka dhaco doorasho.
Goobta ay ku kulmayeen ayaa waxaa si weyn u ilaalinayey ciidamda Amisom maadama ay masuuliyiinta kala aamin baxeen mar hore oo midba kan kale u heysto inuu qoorta u dheereynayo. inta badan kulankii maanta waxaa ay labada Mas’uul ugu wada hadleen doorashada Madaxtinimo ee la filayo in la qabto bisha 8aad ee sanadkani aynu ku jirno.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegayo in madaxweynaha Somaliya oo ah musharax ka mid ah musharaxiinta u taagan xilkaani uu hada doonayo inuu kasbado xildhibaanada baarlamaanka sida ay kula taliyeen dadka isaga u qaabilsan dhinaca siyaasada.kulanka maanta ayey xukumada Farmaajo sugayeen iney wax uun ka soo baxaan laakinse kama soo bixin wax saxaafada iyo aduunweynaha loo sheego.
Dhinaca kale waxaa lagu wadaaa in dhawaantan masuuliyiinta dowlada looga yeero dalkaasi Kenya oo lagu wado iney ka dhacdo doorashada soo socota sida warar isa soo tarayo ay sheegayaan, halka ay ciidamada Africanka ahne ay howshooda ka sii wadi doonaan Mogdisho mudada labada maalin ah ee ay socoto doorashada waxey u badan tahay iney ka dhacdo Kenya doorashada madaxda sare.
Sikastaba dalka Somaliya waxaa lagu wadaa iney shacabkeedu ka baxaan kumeel gaarka la haray mudada fog waxii sanadkani ka danbeeya oo loo rajeynayo dowlad rasmi ah.
· admin on May 18 2011 01:15:26 · 0 Comments · 1950 Reads ·
14,633,370 unique visits